Home Wararka Maanta Wasiirka arrimaha dibadda oo qudbad ka jeediyay furitaanka shirweynaha golaha fulinta midowga...
Wasiirka arrimaha dibadda Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya, Mudane Cabdi saciid Muuse Cali, iyo wefdi uu hogaaminayo ayaa magaalada Adisababa ee dalka Ethiopia uga qeyb galay Xafladda Furitaanka Shirweynaha 40-aad ee golaha fulinta Midowga Afrika.
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo qudbad ka jeediyay kulankan ayaa ku nuuxnuuxsaday in saameynta dhaqan-dhaqaale ee COVID-19 ay tahay in si wada jir ah wax looga qabto, si looga hortago fiditaanka xagjirnimada rabshadaha wata oo ay uga sii dartay masiibada.
Sidoo kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa hoosta ka xarriiqay in Midowga Afrika uu aad ugu dadaalo sidii loo xaqiijin lahaa matalaadda dowladaha xubnaha ka ah Midowga Afrika, wuxuuna ku baaqay in si buuxda loo isticmaalo qoondada loo qoondeeyay.
Gaba gabadii, Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa sheegay in Midowga Afrika ay tahay in ay dib u eegis ku sameeyaan istaraatiijiyaddeeda iskaashi ee dhinacyada badan leh si ay uga tarjumto mudnaanta istaraatiijiga ah iyo ujeedooyinka Afrika.
Ka hor doorashada Golaha Nabadda iyo Amniga ee berri, Wasiirka Arrimaha Dibadda waxa uu sii wadi doonaa wada-shaqeynta uu la leeyahay Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee ku aaddan taageerada Soomaaliya ee xubinnimada 2022-2025.
Shirkaan oo looga hadli doono muddada uu socdo arrimo badan oo muhiimad gaar ah u leh Qaaradda Afrika ayaa maanta waxaa ka qeyb galay furitaankiisa Wasiirada arrimaha dibadda dalalka Afrika.